Tapahan’i Osaka Ny Fifamatorana Maha-tanàna Mpirahavavy an’i San Francisco sy Osaka, Noho ny Resaka Sarivongan’ireo ‘Vehivqavy Mpanala Sorisory’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2018 5:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Nederlands, Ελληνικά, Français, русский, 繁體中文, English
Fametrahana ny sarivongan'ireo “vehivavy mpanala sorisory” ‘Comfort Women’ tamin'ny 22 septambra 2017 tao San Francisco. Pikantsary teo amin'ny fantsona YouTube ofisialy an'ny KPIX.
Nanapaka ny fifamatorana maha-tanàna mpirahavavy azy tamin'i San Francisco ao Etazonia ny tanànan'i Osaka, taorian'ny namelàn'ito farany ny fanamboarana ny sarivongana ho fahatsiarovana an'ireo “vehivavy mpanala sorisory” teo aminà faritra iray fananan'ny tanàna.
Sarivongana nangatahan'ny Fifanomezantànana Ho an'ny Rariny ho an'ireo “Vehivavy Mpanala Sorisory”, vondrona orinasa sivily manokan-tena amin'ny fanentanana ny saim-bahoaka momba ireo vehivavy nanao raharaha miaramila tao Azia ary nandevozin'ireo hery japoney nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Ahitana sarivongana efatra izy io, sarin'ireo vehivavy koreana, sinoa ary filipiana, hatraminà sarim-behivavy iray maty vavolombelon'ny zavatra niainan-dry zareo ireo.’
Raha toa nitarika fihetsika mahery tao Japana izy ireo nandritra ny fampisehoana azy voalohany tamin'ny septambra 2017, nanainga hetsi-panoherana ofisialy avokoa ireo governemanta monisipaly, prefektoraly ary ireo ivontany rehetra nanohitra an'i San Francisco iray volana taty aoriana rehefa novidian'ny tanàna amerikana ilay tanàna, tao anaty fifanarahana iray tsy nisy nifandraisany akory. Norahonan’ny ben'ny tanànan'i Osaka, Yoshimura Hirofumi, hotapahana ireo fifamatorana maha-tanàna mpirahavavy raha toa tsy esorin'ny tompon-tanàna ireo sarivongana, na raha toa tsy ovàna ny maribolana momba azy ireo ho laza torohay hafa.
Farany, tamin'ny 2 Oktobra 2018, notanterahiny io fandrahonana io tamin'ny alalan'ny fanelezana taratasy iray 10 pejy amin'ny teny anglisy misy voanteny miisa 3 800, nalefa ho an'ny ben'ny tanànan'i San Francisco, London Breed, mitanisa – matetika amin'ny soratra matevina, fehezanteny voatsipika – ireo antony nahatonga ilay fanapahana.
Mitaraina izy, ohatra, fa ireo soratra eo amin'ireo sarivongana dia maneho “ireo filazàna tsy marina sy feon-dakolosy tokana ho toy ny zavanisy manan-tantara”, ary ambarany fa misy tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo samy mpahay tantara momba ny tena isan'ireo “vehivavy mpanala sorisory” nanao raharaha miaramila ary momba ny fetra izay naha-tafiditra ny Tafika Japoney tany aloha tany tamin'io.
Raha neken'i Yoshimura ny fisian'ny fomba fitondrana nampahonena natao tamin'ireo vehivavy nandritra ny fotoanan'ny ady, nanazava izy fa “navahana” tsy an-drariny i Japana:
[…] Tsy tokony navahana ho toy ny olana iray manokan'ireo tafika japoney io olana io. Rehefa tsy miaiky ampahibemaso ireo firenena hafa noho i Japana momba ireo olana ara-pananahana ankapobeny eny an-tany fiadiana, tsy ho voahitsy ireo heloka bevava efa lasa, izay tsy maintsy natrehan'izao tontolo izao, ary tsy ho voavaha ireny fanolanana tany amin'ny faritra hafa eo amin'izao tontolo izao ireny.
Raha mbola tsy namaly mivantana ny taratasy, namoaka fanambaràna mikasika ny fanapahankevitr'i Osaka hanapaka an'ireo fifamatorana ny ben'ny Tanànan'i San Francisco, London Breed, manao hoe:
Ben'ny tanàna iray tsy ho afaka mihitsy hamarana ny fifandraisana izay misy eo amin'ireo mponina ao amin'ny tanàna roa, indrindra fa iray izay efa nisy hatramin'ny enimpolo taona mahery. Amin'ny fijerintsika, ny fifandraisana maha-tanàna mpirahavavy misy amin'i San Francisco sy Osaka dia mitohy androany amin'ny alàlan'ireo fifamatorana manakambana ny vahoakantsika, ary fikasan'i San Francisco ny hanamafy an'ireo fifamatorana izay mampifamatotra an'ireo tanàndehibe roa.
“Tsy mbola naneho ny fialàntsininy matotra i Japana”
Fahatsiarovana ny Vehivavy Mpanala Sorisory, ao San Francisco, tamin'ny volana Febroary 2018. An'ny Ka-cw2018/Wikimedia, CC BY-SA 4.0
Ireo vehivavy nanao raharaha miaramila sy nandevozin'ny tafika japoney dia nantsoina tamina anarana manambany hoe ianfu (vehivavy mpanala sorisory) ao Japàna, ary loharanon'adihevitra politika efa hatramin'ny elabe.
Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, 200 000 fara-faha keliny ireo vehivavy avy aminà firenena maherin'ny folo tao Azia no niharan'ny fanerana ho amin'ny fanandevozana ara-pananahana nataon'ny tafika imperialin'i Japana (nanana tambajotranà tranondopy tsy nisy hafa tamin'izany koa i Etazonia nandritra ny nibodoany an'i Japana tamin'ny taona 1944 hatramin'ny taona 1952).
Toerana ahitàna foko Koreana marobe ihany koa i Osaka izy tenany. Ny mpandimby toerana an'i Yoshimura, Hashimoto Toru mpandàla ny nentindrazana, dia fantatra tamin'ny fielezan'ireo adihevitra isankarazany, anisan'izany ny fanambaràna tamin'ny taona 2013 fa “filàna ara-tafika” nandritra ny Ady Lehibe Faharoa ny fanalàna sorisory nataon'ireo vehivavy. Yoshimura, mpisolovava taloha, 41 taona, dia voasarika koa tao anatin'ny fihetsiketsehana ara-politika popilista teo amin'ny sehatra nasionaly sy tao an-toerana hatramin'ny taona 2011.
Fifanarahana iray teo amin'ireo governemantan'i Japana sy Korea Atsimo no nikendrena hamahàna “tanteraka sy amin'ny fomba tsy azo averina” ny olana mikasika an'ireo “vehivavy mpanala sorisory”, saingy niafara tamin'ny fihantsiana an'ireo fihetsiketsehana niparitaka be tao Korea Atsimo.
Avy eo, niharan'ny fitsipaham-pitokisana ary noterena hametraka fialàna i Park Geun-hye, filohan'i Korea Atsimo izay nanao sonia ilay fifanarahana, ary farany nogadraina noho ny resaka kolikoly. Ny mpandimby an'i Park, ny Filoha Moon Jae-in, dia nanambara fa tsy mbola naneho an'ireo fialantsininy tsy mihatsara ivelantsihy i Japana ary mahalala fa nampiasaina sy nandevozina tamin'ny fomba bontolo ireo “vehivavy mpanala sorisory” nandritra ny ady.
Tsy ny sarivongan'i San Francisco irery no niteraka adihevitra. Niady tsy nahita fahombiazana nandritra ny telo taona ireo mpikatroka mba hanesorana ny sarivongana iray mitovitovy amin'io natao ho fahatsiarovana natsangana tao Glendale, Kalifornia, sy ny sarivongana ao Mania izay nolazaina fa nesorina mba hanomezan-toerana an'ireo fanatsarana ny fotodrafitrasa, na dia nitranga aza io fanalàna io taorian‘ireo fanoherana ofisialy nataon'ny governemanta japoney. Toherin'ny governemanta japoney ihany koa ilay “sarivongan'ny fandriampahalemana” , natsangana amin'ny làlana mankany amin'ny masoivohon'i Japana ao Séoul, ao Korea Atsimo.
Hita ato anatin'ity lahatsoratra ity ireo fikarohana nataon'i Eric Johnston .